Magaalo qadiimi ah oo masaajid leh oo laga helay Itoobiya - BBC News Somali
Magaalo qadiimi ah oo masaajid leh oo laga helay Itoobiya
Lahaanshaha sawirka Prof Tim Insoll, University of Exeter
Image caption Calaamadaha ganacsigii qaaliga ahaa ee gobolka ka jiray
Gogobolka Harlaa ee bariga dalka Itoobiya ayaa laga helay magaalo qadiim ah oo la iska iloobay.
Waxaa la aaminsan yahay in magalaadani ay qarniyo ka hor ahaan jirtay xarun ganacsi.
Waxyaabaha haraagoodii la soo faagay ee dhulka hoostiisa loogu tagay waxaa ka mid ahaa masaajid dhisnaa ilaa qarnigii 12aad iyo qubuuro ay Muslimiintu dadkooda ku aasi jireen.
Waxaa kale oo la helay lacag maar iyo qalin ka sameysan oo Masar laga isticmaali jiray qarnigii 13aad iyo dahab iyo qalin dumarku xiran jireen iyo alaabooyin kale oo laga keenay dalalka Madagascar,Maldives,Yemen iyo Shiinaha.
Image caption Masaajid qarnigii 12 ka dhisnaa magaalada Harlaa
Image caption Waxaa la sheegay in magaalada Harlaa ay xarun u ahayd ganacsiga gobolka